Izenzo zangaphambi kokuba ziTyhilwe kwiKhaya e-New Jersey ziphantsi ukusuka kwi-2015, kodwa isekhona ingxaki ekujongwe kuyo ngabaninimzi abaninzi baseNew Jersey- i-NJ & NY yeArhente yeNdawo ethengisa izindlu, uKhuseleko
ikhaya / Blog / Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York / Izenzo zangaphambi kokuba ziveliswe ezindlwini zaseNew Jersey ziphantsi ukusuka kwi-2015, kodwa isekhona ingxaki ejongene nabaninimzi abaninzi baseNew Jersey
Aprili 11, 2016 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoUDerek Soltis
Ngaphezulu kweKhaya le-3,000 inyanga i-Enter Enter pre-Foreclusive in New Jersey
Kwiinyanga ezintathu zokuqala ze-2016 ngaphezulu kwe-9,200 lis pendens kufakwe iifayile kwilizwe lonke eNew Jersey. I-lis pendens sisenzo sangaphambi kokubhengeza okufakwe kwinkundla yamatyala. Iibhanki ezinkulu kunye nabanye abantu abafuna ukubikezela kwifayile yepropathi i-lis pendens ukuqala inyathelo lokuchazwa kwangaphambili komnini-ndlu. I-lis pendens ibonelela bonke abathengi abanokubakho kunye nabanini betyala elivakalayo ukuba kukho isimangalo esichaphazela ipropathi. Nawuphi na umntu onomdla okanye unomdla wokufumana ipropathi unokufumana ukuba kukho amanyathelo asemthethweni abandakanyekileyo kwipropathi ngokujonga iirekhodi zenkundla. Oku kusebenza ukukhusela abathengi bepropathi.
Ngaphezulu kweKhaya le-100 ngosuku I-Pre-Foreclosure Action ifayilishwe eNew Jersey
Ngoku ka I-RealyTrac, phantse i-1.1 yezigidi zeepropathi kuzwelonke zazineefilimu eziveziweyo kwi-2015. Kwi-2015, malunga nokuchongwa kwangaphambili kwe-41,200 kwafakelwa isimangalo eNew York ngokweNgxelo yeNkundla yaseNew Jersey. Lo ngumndilili wamakhaya e-113 ngemini yokwenza isenzo esifakwa kwi-ferrs eNew York.
Umgangatho wokugcwaliswa kwezenzo zokuchazwa kwangaphambili kweenyanga ezintathu ze-2016 eNew Jersey yehle i-10.6% ukusuka kwi-avareji yemihla ngemihla ye-2015. Iirekhodi zenkundla zaseJersey zibonisa ngaphezulu kwe-9,060 lis pendens izenzo zazaliswa ngoMatshi 31, 2016. Oko kusebenza ukuba kumndilili wamakhaya e-101 ngemini eza kuthathwa phambi kwexesha kwi-New Jersey ngenxa ye-2016. Kwi-2015 ngexesha kwiinyanga ezintathu zokuqala zonyaka, phantse izenzo ze-11,500 zokuchazwa kwangaphambili zazifayilisiwe.
I-Jersey City Pre-Foreclosure Actions ine-5th yeyona nto ininzi yeefayile ezenziweyo kwiJersey ye2016
Iindawo ezinobugwenxa kakhulu kwi2015 eNew Jersey yayiyiNewark eneefilitha ezingaphezu kwe-1350, iTrenton eneefilitha ze-1050, Paterson eneefilitha ze-880, iJersey City eneefilitha zangaphambi kwexesha ze-850, kunye neToms River eneefilitha ze-700. Ukuqala kwe-2016, ezi zixeko zihlanu zihlala zihlala zizixeko ezinefayile ezininzi, kodwa iToms River ineefilimitha ezingaphambi kokuba zibonakalise ukwedlula isixeko saseJersey ukuqala unyaka.
Phendula i-New Jersey Lis Pendens ngeentsuku ze-35
Nje ukuba isamani kunye nesikhalazo zithunyelwe kumnini khaya, umnini mzi uneentsuku ze-35 zokufaka impendulo eNew Jersey ukufaka impendulo eNew Jersey okanye ukugwetywa okunokwenzeka. Nokuba ujongene nesherifu yokuthengisa umzi wakho ngekhe kungabi kudala kakhulu ukuba uqhagamshelane negqwetha eNew Jersey ukufaka ifayile yesenzo sokungxamisekileyo ukusindisa ikhaya lakho. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nokuvezwa kweNew Jersey, nceda unxibelelane negqwetha namhlanje.
Xa ndisweleka uzakufumana malini urhulumente?
Kutheni le nto uLwakho uWills eyingozi?